Inona no atao hoe Zava-misy Augmented? Teh History sy ohatra tena misy eto amin'ny AR
Inona no atao hoe Zava-misy Augmented? Ahoana no ampiasana ny AR amin'ny marika?
Alahady, Jona 3, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Raha ny fahitan'ny mpivarotra azy dia mino aho fa manana ny tena zava-misy ny augmented raha ny marina no misy. Na dia mamela antsika hiaina traikefa artifisialy tanteraka aza ny zava-misy virtoaly, ny zava-misy ampitomboina dia hanatsara sy hifandray amin'ny tontolo iainantsika ankehitriny. Nifampizarantsika mialoha ny fomba AR dia mety hisy fiantraikany amin'ny marketing, saingy tsy mino aho fa nanazava tamin'ny fomba feno ny zava-misy marina izahay ary nanome ohatra.
Ny lakilen'ny fahaiza-manao amin'ny marketing dia ny fandrosoan'ny teknolojia smartphone. Miaraka amin'ny bandwidth malalaka, haingam-pandeha informatika izay nifaninana tamin'ny birao vao taona vitsy lasa izay, ary fahatsiarovana maro - fitaovana finday avo lenta no manokatra varavarana ho amin'ny fananganana sy ny fampandrosoana efa tena izy. Raha ny marina, tamin'ny faran'ny taona 2017, 30% n'ny mpampiasa finday avo lenta no nampiasa fampiharana AR… mpampiasa 60 tapitrisa mahery tany Etazonia fotsiny
Inona no atao hoe Zava-misy Augmented?
Augmented reality dia teknolojia nomerika izay mametaka lahatsoratra, sary na horonan-tsary amin'ny zavatra ara-batana. Amin'ny fotony, ny AR dia manome ny karazam-baovao rehetra toy ny data, ny lohateny, ny sary, ny audio ary ny data manafaingana, ary manokatra làlana ho an'ny valiny ara-potoana. AR dia manome fomba iray hampiatoana ny elanelana misy eo amin'ny traikefa ara-batana sy ara-niomerika, manome hery ny marika hifaneraserana bebe kokoa amin'ny mpanjifany ary hitondra ny valin'ny asa tena izy ao anatin'izany.
Ahoana ny fomba ampiasana ny AR amin'ny varotra sy marketing?
Araka ny tatitra nataon'ny Elmwood farany teo, ny teknolojia fanahafana toa ny VR sy ny AR dia natao hanomezana tombam-bidy eo noho eo indrindra ho an'ny marika antsinjarany sy ho an'ny mpanjifa amin'ny sehatra roa lehibe. Voalohany, izy ireo dia hanampy lanja izay manatsara ny traikefan'ny mpanjifa ny vokatra. Ohatra, amin'ny fanaovana fampahalalana momba ny vokatra sarotra sy votoaty manan-danja hafa mahasarika kokoa amin'ny alàlan'ny gamification, fanomezana fampianarana isan-tsokajiny, na fanomezana fitenenana fihetsika, toy ny amin'ny fanarahana ny fanafody.
Faharoa, hiainga ireo teknolojia ireo amin'izay ahafahan'izy ireo manampy ny marika hampahafantatra sy hanova ny fomba fahitan'ny olona ny marika amin'ny famokarana traikefa manan-karena sy mifandray ary fitantarana maharesy alohan'ny fividianana. Mety tafiditra ao anatin'izany ny fanaovana fonosana fantsom-pifandraisana vaovao, mampifandray ny elanelana misy eo amin'ny fiantsenana an-tserasera sy ara-batana, ary mamelona ny doka nentim-paharazana miaraka amin'ny tantaran'ny marika mahery vaika.
Ohatra amin'ny fampiharana ny zava-misy marina ho an'ny varotra sy ny varotra
Ny mpitarika iray dia IKEA. IKEA dia manana rindrambaiko fiantsenana izay ahafahanao mivezivezy mora foana ny tantaran'izy ireo ary mahita ireo vokatra hitanao rehefa mizaha ao an-trano. miaraka IKEA Toerana ho an'ny iOS na Android, ny fampiharana azy ireo izay mamela ny mpampiasa “mametraka” ny vokatra IKEA eo amin'ny habakabakao.
Amazon dia nanaraka ny ohatra Hijery AR ho an'ny iOS.
Ohatra iray hafa eny an-tsena ny toetran'ny Yelp ao amin'izy ireo finday fampiharana antsoina hoe Monocle. Raha misintona ny fampiharana ianao ary manokatra ny menio misimisy kokoa dia hahita safidy antsoina ianao Monocle. Ny Open Monocle sy ny Yelp dia hampiasa ny toerana misy anao, ny toeran'ny telefaoninao, ary ny fakan-tsarinao hanaronana ny angon-drakitra an-tsary amin'ny alàlan'ny fijerin'ny fakantsary. Tena tsara izy io - gaga aho fa tsy dia miresaka momba izany matetika izy ireo.
Ny teatra AMC dia manolotra a fampiharana finday izay ahafahanao manondro amin'ny afisy ary mijery topy sary mihetsika.
Modiface nandefa fitaratra azo ifandraisana ho an'ny fivarotana antsinjarany ahafahan'ny mpampiasa mandinika ny fomba fijerin'izy ireo amin'ny makiazy, volo, na fametahana hoditra. Sephora dia namoaka ny haitao tamin'ny alàlan'ny rindranasa finday.
Ny orinasa dia afaka mampihatra ny fampiharana mihamitombo izay ampiasainy ARKit ho an'ny Apple, ARCore ho an'ny Google, na Hololens ho an'ny Microsoft. Afaka manararaotra izany koa ireo orinasa mpaninjara SDK an'i Augment.
Zava-misy mitombo: lasa, ankehitriny ary ho avy
Ity misy topy tsara amin'ny infographic, Inona no atao hoe Zava-misy Augmented, novolavolain'i Vexels.
Tags: artsena araugmented zava-misyfamaritana tena zava-misyho avy na artantaran'ny arKatalaogy ikeaKatalaogy ikeavexelsinona ny arinona ny zava-misy nampitomboinafampiharana finday yelpyelp monocle
Ny tombony 4 an'ny micro-influencer